ESI KESAA AKWUKWO PDF N'IME IBE - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Anyị kewaa faịlụ PDF n'ime ibe
Ka oge na-aga, ndị mmepe nke Mozilla Firefox nchọgharị na-ahapụ mmelite ọ bụghị naanị na melite arụmọrụ na nchedo, kamakwa na kpam kpam na-agbanwe interface. Ya mere, ndị ọrụ nke Mozilla Firefox, malite na mbipute 29 nke ihe nchọgharị ahụ, enwewo mgbanwe dị ukwuu na ntanetị, nke na-adịghị mma maka onye ọ bụla. N'ụzọ dị mma, n'iji Usoro Akụrụngwa Akụrụngwa na-agbakwunye, mgbanwe ndị a nwere ike gbanwee.
Akụrụngwa Okwu Restorer bụ Mozilla Firefox nchọgharị tinye-na na-enye gị ohere ịlaghachi na ihe ochie nchọgharị imewe, nke mma ọrụ ruo version 28 nke ihe nchọgharị gụnyere.
Olee otú iji wụnye Classic Theme Restorer maka Mozilla Firefox?
Chọta Akụrụngwa Okwu Weghachite na tinye-na ụlọ ahịa Firefox. Ị nwere ike ịga ozugbo na saịtị nbudata na njikọ ahụ na njedebe nke isiokwu ahụ, gaa na nke a meju onwe gị.
Iji mee nke a, mepee menu ihe nchọgharị ma họrọ ngalaba "Add-ons".
N'elu aka nri elu, tinye aha nke tinye-anyị chọrọ. Akụrụngwa Akụrụngwa.
Ihe mbụ na ndepụta ga-egosipụta mgbakwunye anyị chọrọ. Pịa n'aka nri ya na bọtịnụ ahụ. "Wụnye".
Iji mee mgbanwe ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-achọ ịmalitegharịa ihe nchọgharị ahụ, dịka usoro ahụ ga-agwa gị.
Kedu otu esi eji kpochapu kristin na-eweghachi?
Ozugbo ịmalitegharịrị ihe nchọgharị ahụ, Classic Theme Restorer ga-eme mgbanwe na nyocha ihe nchọgharị, bụ nke anya na-ahụ anya.
Dịka ọmụmaatụ, ugbu a, a na-ahụ menu ahụ, dị ka ọ dị na mbụ, n'aka ekpe. Iji kpọọ ya, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ na akuku aka ekpe Firefox.
Lezienụ anya n'eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị ebe ọ bụla ka usoro nchịkọta nke ụdị ọhụrụ a.
Ugbu a, okwu ole na ole gbasara ịhazi mgbakwunye. Iji mepee ntọala Classic Theme Restorer, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị na akuku aka nri elu, wee mepee ngalaba ahụ "Add-ons".
Na nkwụnye aka ekpe, họrọ taabụ "Ọpụpụ", na n'akụkụ aka nri dị nso na Classic Theme Restorer, pịa bọtịnụ "Ntọala".
Ihuenyo ahụ ga-egosipụta igodo window ntọala Classic Theme Restorer. N'akụkụ aka ekpe nke windo bụ taabụ nke isi ngalaba maka tweaking. Dịka ọmụmaatụ, site na ịmepe taabụ ahụ "Firefox bọtịnụ", ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ụzọ zuru ezu ọdịdị bọtịnụ dị na akuku aka ekpe nke ihe nchọgharị weebụ.
Akụrụngwa Okwu Restorer bụ ihe na-akpali mmasị ngwá ọrụ maka customizing Mozilla Firefox. N'ebe a, isi ihe na-elekwasị anya bụ na agba nke ochie nsụgharị nke ihe nchọgharị a, mana ọ ga-amasị ndị na-achọ ịmepụta nlele nke ihe nchọgharị ha kachasị amasị.
Download Omuma Okwu Restorer maka Mozilla Firefox maka n'efu